Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao baolina kitra frantsay Kylian Mbappe tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny kintan'ny baolina kitra malaza amin'ny anarana; "Ny Printsy 2nd ao Monaco". Ny tantaran'ny tantaram-pitiavan'i Kylian Mbappe momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra dia mitondra ny fitantarana feno momba ny zava-mitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy. Lets Begin;
Kylian Mbappe tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Fiainana tany am-boalohany
Kylian Mbappé Lottin Teraka tany Bondy, avaratry ny atsinanan'i Paris tamin'ny 20 ny volana desambra 1998 avy amin'ny rainy Kameroney, ny filoha Wilfried Mbappe (mpanazatra) ary reny Alzeriana, Fayza Mbappe Lamari (mpilalao an-tsokosoko taloha). Ny nahaterahany dia tonga enim-bolana taorian'ny nahazoan'i Frantsa ny Fiadiana ny amboara eran-tany 1998 tao Stade de France izay 11km avy any amin'ny tanàna nahaterahany. Ho an'ny zazalahy kely iray, dia nisy zavatra iray azo antoka ho an'ny zaza lozam-pifaneraseran'ny zaza teraka "Baolina kitra."
Araka ny hevitry ny rainy,
"Ny zanaky Kylian dia mihoatra noho ny lozisialy momba ny baolina kitra - heveriko fa adala izy. Izy no mametraka ahy matetika na dia mahita ny tenako ho mpilalao baolina kitra aza aho. Izy foana no ao anatin'izany 24 / 7. Kylian dia mijery ny zava-drehetra. Afaka mahita lalao efatra na dimy izy. "
Niharatsy ny tanàna tany Paris, izay ravan'ny herisetra sy ny fikomiana taloha. Ny zava-drehetra momba ny hoaviny dia notarihin'ny fianakaviany.
Ny fahaizany mametraka laharam-pahamehana ny fotoana dia nampiseho ny fahombiazany tamin'ny baolina kitra. Tsy nandany ny fotoanany ara-demokratika mihitsy izy. Nolazainy fa tsy misy zavatra manan-danja toy ny mandeha any am-pianarana amin'ny fotoana rehetra mba ahafahana manao fotoana ho an'ny baolina kitra. Eny, zava-dehibe ny fotoana niarahany tamin'ny fianakaviany sy ireo namana akaiky, saingy taorian'izay dia nisy baolina kitra ary zavatra hafa.
Nianatra ny fomba hivoahana eo ankavia izy ary ahoana no fomba hitarafana haingana. Tsy nilaozana ny fianarana dibebaka. Izany no fomba nanatsarany ny lalao.
Tamin'ny taona 6, izy dia noraisina toy ny mpilalao baolina kitra malaza any Frantsa. Fotoana nahalalan'ny Federasiona Football an'ny Frantsay izany. Nanao zava-dehibe toy ny ankizy i Kylian. Imbetsaka izy no nandao ny namany tamin'ny fialonana sy ny tahotra.
Na dia mbola zaza aza i Mbappe dia afaka nitondra fahombiazana. Nahazo ny fanomezam-pahasoavany manokana sy talenta izy. Tsy misy na dia iray aza eo amin'ny sary etsy ambony dia nanamboatra azy io toy ny nataony. Ny sasany tamin'izy ireo dia namoy ny lalany teny an-dalana.
Mbappe dia maneho ny fahombiazany amin'ny toerana azo antoka. Ny fahatsapany sy ny finoany ny tenany no nitondra azy tany amin'ny hoaviny.
Kylian Mbappe tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ray: Ny rainy, Wilfried Mbappe no fakany avy any Kamerona sy Nizeria ary miasa ho mpanazatra ao AS Bondy (Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana). Fialofana izay nigadra tany Frantsa noho ny ahi-maitso maitso. Mr Wilfried, amin'ny fandefasana hijanona maharitra, dia nanambady olon-tsotra Alzeriana-frantsay, Fayza.
Nanomboka nampiofana an'i Kylian zanany izy tamin'ny faha-enim-polo taonany, tamin'ny andron'ny roa taona latsaka kely.
Izy no mpilalao baolina kitra amin'izao fotoana izao ho an'ny zanany. Nanofa mpanazatra ho an'ny rahalahy tanora Adeyemi Mbappé izy.
rENY: Tsy ny dadan'i Mbappe ihany no nandalo ny fitiavana sy ny fananany. Ny renin'i Fayza Mbappe, teraka Fayza Lamari, dia avy any Alzeria. Mpilalao mpilalao matihanina taloha izy.
Fayza Mbappe no renim-pianakaviana mirehidrehitra frantsay prodigy mpiloka, Kylian Mbappe. Ny maha-atleta azy taloha, dia mahafantatra marina i Fayza Mbappe ohatrinona Ny asa dia mila manao izany ilay matihanina an-tsaha. Ilay mpilalao mpilalao taloha dia niarahaba ny zanak'i Kylian tamin'ny Desambra 20, 1998, any avaratra-atsinanan'i Paris. Hitany izy nitombo ho lasa tanora tsara ny lehilahy ary ny tena manan-danja indrindra amin'ny iray amin'ireo mpilalao lehibe eto amin'izao tontolo izao. Mipetraka any Bondy, any Frantsa ankehitriny izy.
Kylian Mbappe dia rahalahin'ny antsasany Jires Kembo-Ekoko izay mendrika an'i Kongo. Ny dadany dia mpilalao baolina taloha, namana akaiky an'i Mr. Wilfried Mbappe izay nasongadina ho an'i Zaire tao amin'ny World Cup 1974.
Nirohotra nankany Frantsa ny jiro fony izy mbola zaza niaraka tamin'i Wilfried Mbappe izay lasa mpiambina azy.
Izy no 10 taona efa zokiny noho ny tanora Kylian izay efa maizimaizina ny lalan'ny baolina kitra eran-tany. Ny fifampiarahabana ho toy ny mpirahalahy sy jira dia ny sampy voalohany nataon'i Kylian. Indray mandeha izy nilalao ny baolina matihanina tao Rennes.
Zandry kely: Kylian Mbappe dia manana rahalahy kely antsoina hoe Ethan izay 7 taona tanora. Ireo antoko roa ireo dia mihevitra ny tenany ho fanomezana lehibe indrindra nomen'ny ray aman-dreniny azy ireo. Kylian Mbappe indray dia nanao fifanarahana tamin'i Monaco hamela ny rahalahiny ho ny masoko. Izany dia nitranga rehefa nandresy lahatra an'i Ethan izy hitondra azy ho toy ny moka ao amin'ny Ligin'ny Champions.
Hoy i Mbappe: "Tiany izany. Fotoana niavaka izany. Nanapaka ny lohako tao an-trano izy. Hoy izy hoe "Ento aho, ento aho", dia hoy aho hoe "OK, hitondra anao aho, avia ry ..."
Mahaliana ny mahafantatra fa i Ethan Mbappe no antony sy loharanon'ny aingam-panahy ho an'ny antony ankalazan'i Kylian ny tanjony amin'ny fametrahana ny tanany miampita sy ny ankihibe. Kylian Mbappe dia manaiky fa i Ethan no manao azy rehefa mamely azy ao amin'ny FIFA Playstation.
Araka an'i Kylian, 'Tsy izaho no niaraka taminy. Ny rahalahiko, Ethan. Nankalaza izany tahaka izao izy isaky ny manala baraka ahy amin'ny Playstation FIFA '
Kylian Mbappe tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Relationship Life
Ny fipoiran'ny moron-dranony ho any amin'ny lazany, ny fanontaniana amin'ny lisitry ny tsirairay dia hoe .. Iza no sakaizan'ny Kylian Mbappe? ...
Tsy isalasalana fa nataony ho lasa paoma amin'ny masom-behivavy maro izy. Izy dia eo amin'ny fifandraisana izay tiany ho tsiambaratelo. Any amin'ny faran'ny lalao sasany, Mbappé indraindray miteraka ny fitarainan'ny ankizivavy sasany. Indrindra ao amin'ny toeram-piantsonan'ny kianja, ankizivavy maro no miandry ny fahareseny.
Araka ny reniny "Tsy ho vita ny hiaina any Paris noho ny fisaritahan'ny vehivavy. Ao Monaco, azo antoka kokoa izy ".
Kylian Mbappe tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Sekoly mitovy amin'ny Grika frantsay
MBappé dia nankany amin'ny Clairefontaine. Firenena izany baolina kitra ivon-toerana ary akademia izay miompana amin'ny fampiofanana mpilalao baolina kitra Frantsay. Nahazo diplaoma tao amin'io Akademia io izy tao amin'ny 2011. Manana honom-boninahitra ireo nahazo diplaoma malaza izy, anisan'izany i Thierry Henry, Nicolas Anelka, Blaise Matuidi, Hatem Ben Arfa ary William Gallas.
YMbappé dia nalaza tao Clairefontaine. Rehefa nanontaniana mikasika ny faniriany izy, dia niresaka momba ny Real Madrid izy ary niteny hoe: "Tsara kokoa ny mifantoka amin'ny volana. Amin'izany fomba izany, raha tsy mahomby ianao dia tonga any amin'ny rahona. "
Kylian Mbappe tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Rising to Fame
Taorian'ny fipoahan'ny rainy, izay namintina tamin'ny fampitandremana efa manjavozavo fa hitady fifindrana amin'ny varavarankely amin'ny volana Janoary raha tsy niova ny zava-drehetra, nanapa-kevitra ny hanomboka an'i Montpellier ny mpitantana Monaco, Leonardo Jadim. Mbappe dia nirotsaka be tao amin'ny volan'ny 6-2 tao Montpellier ary tsy niherika intsony.
He dia namono ny fandreseny voalohany tamin'ny fiadiana ny amboara tamin'ny 7-0 tamin'ny volana Desambra tany Rennes, ny faharoa tamin'ny 5-0 tamin'ny volana febroary nitondra an'i Metz ary nankalaza ny ligy voalohan-dalan'ny Champions League tamin'ny alàlan'ny fakana sary an-tsaina ny fiarovan-tenan'i Manchester City mba hahazoana ny tanjony voalohany. amin'ny fifaninanana ary hametraka ny sezany 2-1.
Tamin'io fotoana io, rehefa nisintona ny sain'ny media manerantany i Mbappé fony mbola zatovo.
Kylian Mbappe tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Famerenana ny birao
Tamin'ny taona 15, rehefa nandao an'i Clairefontaine ny mpianatra taorian'ny roa taona mba hiditra tao amin'ny rafitra klioba matihanina, dia nododonan'i Mbappé avokoa ny Ligue 1 hafa, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Liverpool ary Bayern Munich mba hiaraka amin'i Monaco ary nifindra tany amin'ny fanjakana. Tohizo ny fianarany.
ANa izany aza, i Wilfried Mbappé dia naniry ny zanany hijanona miaraka amin'i Monaco raha toa ka omena fotoana ampy izy, tamin'ny volana oktobra, roa volana taorian'ny nandavan'i Monaco £ 40m ny vidin'ny Manchester City, tsy nanomboka ny lalao i Kylian ary ny Maty ny rainy, araka ny nilazany ny L'Equipe:
Kylian Mbappe tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Breaking Records
Izy no nanombohany voalohany an'i Monaco nandritra ny taona 16 sy 347 androany, nidaroka ny rakitsoran'i Henry, izay 17 taona sy 14 andro raha vao tonga ny klioba noho ny 20 taona lasa izay.
Na dia, Henry dia nilaza fa tsy rariny ny miantso ny Mbappe 'ny vaovao Thierry Henry'. BTsy misy olona mihaino ny fampitandremany ... ankoatra ireo izay te hiantso azy hoe 'Neymar vaovao'. Izy no mpaninjara tanora indrindra ho an'i Monaco. Mbappe koa dia nanapaka ny rakitsoratr'i Eoropa tamin'ny antsapaka ho an'ny tanjona na fanampiana - alohan'ny i Lionel Messi.
Kylian Mbappe tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Serasera Thierry Henry
Amin'izao fotoana izao, Thierry Henry tsy nahalala mihitsy hoe nitifitra tamin'ny zazalahy 5 iray izy izay hanohitra azy amin'ny famongorana ny roa amin'ireo rakitsorany.
Araka ny voalazan'i Henry, "Nihaona indray mandeha tamin'izaho mbola zazakely aho. Ankehitriny, tovolahy tsara tarehy izy ary manana loha tsara eo an-tsorony. Tena manaja sy mangina izy. Tapa-kevitra izy ary tsy hitsahatra. Izy no resaka momba ny tanàna ary manana talenta betsaka. Manana fahaiza-manao, tanjona, manampy izy. Afaka manao izay tiany amin'ny baolina izy. "
Kylian Mbappe tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Fihaonana an'i Christiano Ronaldo
Ity sary eto ambany ity dia mampiseho ny sandrin'i Cristiano Ronaldo nanaloka ny kibon'i Kylian Mbappe tao amin'ny toeram-piofanana Real tao Valdebebas. Ireto ny 13. Ny fahafahany mihaona C Ronaldo tonga taorian'ny fanasana nataon'ny Zinedine Zidane.
Mbappe, eo amin'ny sary, dia zazalahy kely. Fotoana iray hanamafisana ny taonany maro. Ronaldo Etsy ankilany kosa dia mitovy ny azy. Mbappe dia nitombo ho tovolahy tsara tarehy tao anatin'ny fotoana fohy.
Mba azo amin'ny sary miaraka amin'i Ronaldo dia tsy isalasalana fa fifaliana ho an'ny ankizy toa an'i Mbappe. Androany dia nanao ny lalany manokana manerana izao tontolo izao izy ary mety ho toy ny fandrahonana an'i Ronaldo. Androany, fandrahonany ny halavany sy ny Ballon d'Or.
Tahaka izany koa, Paulo Dybala dia nanambara mivantana fa i Lionel Messi dia "sampy". Nihalehibe ny superstar Barcelone izy. Tao amin'ny Ligin'ny 2016 / 2017, dia noroahin'i Dybala avy tao amin'ny ambaratonga Knockout izy. Time ticks by. Mampalahelo ny mieritreritra fa ho avy ny andro rehefa tsy milalao intsony i Lionel Messi sy Cristiano Ronaldo. Ho lasa izy ireo ary hanana fahatsiarovana fotsiny ihany.
Kylian Mbappe tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Izay lazain'ny hafa momba azy
"Mpilalao tena tsara i Mbappé. Ankehitriny dia ampitahaina amin'ny Thierry Henry izy ary milalao tahaka azy. Mbola tanora izy saingy raha mbola manohy manatsara toy izany izy dia hilalao amin'ny ekipa nasionaly ho azo antoka. " Bacary Sagna.
"Tsy i Thierry Henry mihitsy izy fa marina fa manana toetra mitovy izy ary mitovy ny ho avy sy ny talenta. Ny tanjony dia mitovy, aorian'izany raha manana ny lanjan'ny fanentanana, ny faniriana sy ny faharanitan-tsaina izay ananan'i Thierry, ary ny roa na telo taona manaraka dia hilaza amintsika fa afaka manome toky izy avy eo. " Arsène Wenger.
"Efa 18 taona izy ary mahatalanjona ny zavatra ataony. Hatramin'ny voalohany, hitanay ary fantatray fa mpilalao kely hafa izy, tamin'ny fomba nanohina ny baolina ho ohatra. Manana lalao izay manana zavatra manokana izy. Ankoatra izany dia miasa be izy. Manantena aho fa mbola hanohy hanampy antsika handresy anaram-boninahitra izy. " Bernardo Silva.
"Manana talenta izy, tsy azo lavina izany. Manana tanjona tsara izy ary mihevitra isika fa ho any Rosia. " LifeBogger. "
Kylian Mbappe tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -The Bromance
Ny fahatongavan'i Monaco dia tsy mbola teraka raha i Gianluigi Buffon, leurs du Juventus, dia nomena anarana ho an'ny ekipa Italie ho an'ny mondialy 1998 ao Frantsa.
Ary ho an'i Mbappe, izany dia iray amin'ireo antonta maromaro azony resahina amin'ny avonavona rehefa maka ny toeran'i Monaco izy hatramin'ny efatra farany. Ny tanjany amin'ny tanjon'ny ligin'ny Champions League enina amin'ny 2016 / 2017 dia midika fa nahare ny tanjona mitovy amin'ny fifaninanana izy talohan'ny 19 ho an'i Raul.
Kylian Mbappe tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Hifarana haingana
Raha mandinika tsara ny olona iray, dia mety hahatsikaritra ny fahanterana eo anatrehan'ny tarehy izay tsy mifanaraka amin'ny taonany ankehitriny.
Indray andro, ireo ketsa hita teo amin'ny masony. Izany dia manampy amin'ny fahamatorana sy ny faharanitan-tsaina.
Kylian Mbappe tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Tsy misy Luxury
Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, mbola velona any amin'ny tokotanin'ny fiofanana ao Monaco i Kylian. Ny fandaharam-potoany dia ny mametraka ambany sy miorim-ponenana mba tsy hahatonga ny lazaina ho lohany. Rehefa manodidina ny fianakaviany ny ray aman-dreniny, dia mamela ny toeram-ponenana izy mba hijanona miaraka amin'ny mamanay sy ny rainy ary ny zandriny lahy
Mbola manana ny efitranony any amin'ny foibe fanofanana i Kylian. Na izany aza anefa dia azony atao ny mividy trano iray miaraka amina dobo filomanosana miaraka aminy. Tsy izany anefa no izy. Hitany ny tsy firaharahan'ny ekipa sasany izay very. Mba hiarovana azy dia nandresy lahatra azy aho mba hijanona ao amin'ny foibe (academy). Na izany aza, manantena ny hahazo toerana ho azy manokana izy amin'ny hoavy tsy ho ela. Hoy ny rainy.
Kylian Mbappe tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -LifeBogger Rankings
Robert Aogositra 6, 2018 Ao amin'ny 11: 04 am
Kylian dia toy ny tovolahy iray feno fotsy manana lohandriana tsara eo an-tsorony. Faly aho fa ny rainy dia efa nahita mialoha ny hampiofana azy amin'ny faha-enim-polo taonany. Ankehitriny, ny asa mafy rehetra dia miala!
Detra Aogositra 7, 2018 Ao amin'ny 8: 54 am
Tsara ny mamaky tantara tahaka ny fahazazany. Maro ny mahafantatra momba ireo mpilalao baolina kitra sy mpilalao sarobidy. Tsara ny famakiana.
Isabel Aogositra 7, 2018 Ao amin'ny 9: 11 am
Misy hatrany ny fomba fiasa mafy mba hahatratrarana izay ilainao. Mbappe dia lehilahy mahafinaritra ary azo antoka fa handeha lavitra izy.
Jonna Mayo Aogositra 7, 2018 Ao amin'ny 9: 49 am
Ny ray aman-dreny dia manana andraikitra lehibe amin'ny fanaovana izay hahatontosan'ny zanany ny nofinofiny na ny talentany. Tsara foana ny manohana ny zanatsika.
Lavonia K Aogositra 7, 2018 Tamin'ny 6: 33 hariva
Wow, misy ny antony rehetra. Nieritreritra aho fa avy amin'ny rivotra no nankalazainy ny tanjony tamin'ny sandriny. Mipoitra izany fa misy ny antony ao ambadik'izany.
Rod Silvers Aogositra 7, 2018 Tamin'ny 6: 59 hariva
Mandroso be isika alohan'ny hahombiazantsika. Tsy mora ny manatratra ny tampony raha tsy manokan-tena be loatra ny fotoananao. Mitaky asa mafy sy fitiavana koa izany.
Man Aogositra 7, 2018 Tamin'ny 7: 12 hariva
Nahafinaritra be ny namaky ny lahatsoratr'i Mbappe toy izany. Hitako ilay lahatsoratra ary tsy misalasala hamaky azy io. Nianatra zavatra betsaka taminy aho.
Pablo Aogositra 7, 2018 Tamin'ny 7: 36 hariva
Tahaka ny mahazatra dia zava-dehibe ny manam-paharetana amin'ny zavatra rehetra ataonao. Ny zavatra lehibe mitranga rehefa miandry ianao. Tsy misy fiavonavonana. Ary koa, araka ny nolazainy, dia sarotra izay manisa. Mahaiza mazoto amin'ny zavatra rehetra ataonao.
Dominque Maiden Aogositra 7, 2018 Tamin'ny 7: 50 hariva
Maro ny zavatra novakiako, izay mbola tsy henoko hatramin'izao. Nieritreritra aho fa tantara fohy fotsiny izany, saingy lasa be dia be ny zavatra nitranga tao amin'ny fiainan'i Mbappe.
Donte B. Aogositra 8, 2018 Ao amin'ny 3: 59 am
Mbappe dia manana fiainam-pianakaviana hafa raha oharina amin'ireo mpilalao hafa. Izy dia tahaka ny fijanonany eo amin'ny trano fialofana. Na izany na tsy izany, dia nahavita be izy ary nanantena ny handeha lavitra.
Brad Aogositra 8, 2018 Ao amin'ny 4: 05 am
Mbappe dia be dia be ao amin'ny tantarany. Tsy fantatro fa nihaona tamin'i Christiano izy tamin'ny fahatanorany. Tsara izy ary mbola miandry ny hahita fahombiazana avy aminy isika amin'ny manaraka
Rose Aogositra 8, 2018 Ao amin'ny 4: 21 am
Ity no toerana tsara indrindra hamakiana ireo zava-misy iainan'ny olona manokana sy ireo mpilalao baolina kitra ho avy. Mbola namaky lahatsoratra iray aho ary tena nahavariana.
Serah Agbor Novambra 22, 2018 Tamin'ny 2: 16 hariva
Tandroka manoloana ny ray aman-dreny! Mbappe Tiako ny lalao video, noho izany dia mahery vaika, mihazakazaka toy ny bisikileta ianao, izaho dia toy ny wow! Rehefa nahita anao nilalao voalohany aho dia nahita an'i Thierry Henry, nahita an'i Ronaldinho, sari-tany baolina kitra aho. Ny tsara indrindra amin'ny mpilalao baolina kitra.
ALICIA HUDSON Novambra 26, 2018 Ao amin'ny 7: 55 am
Lottin Mbappe TSY MISY PHENOMENON TSY MISY IZANY. MITANDRINA NY RAY AMAN-DRENY. MBAPPE IREO IDOLO IZY IO I ADMIRE ITY VEHIVAVY, VOUS ETES MON MODELE. I AM AFRIKA AFRIKANINA I SPEAK ANGLISY, AFRIKAANINA, ZOLO SY NY FIANARANTSOA IZAY MITANDREMA FRANTSA IZANY IZY IREO TOKONY HATAONTSIKA NY IDOLO AHO.
Tiwonge chauma 16, 2019 Ao amin'ny 5: 15 am
Ny zanako kely dia nianatra zavatra maro avy aminy.rahalalanareo rehetra tsara indrindra rehefa mandroso amin'ny asa aman-draharahanareo ianareo